I-Albany College ye-Pharmacy Admissions: SAT, I-Admit Rate
Izikolo ze-SAT, Imali yokwamkeleka, iNcediso yezezeMali, iNqanaba lokuQiniselwa kweeMviwo, kunye Naphezulu
I-ACPHS, i-Albany College ye-Pharmacy kunye neSayensi yezeMpilo, i-admissions ekhethiweyo. Ngo-2016, isikolo esikhethekileyo sinezinga lokumkela i-69%. Uninzi lwabafundi abavunyelweneyo banamabanga amabini kunye namanqaku okuhlolwa asemgangathweni angaphezu kwemyinge. Ikholejini isebenzisa iSicelo esiQhelileyo, kwaye abafundi mabazithumele izikolo ze-SAT okanye ze-ACT, isitatimenti somntu siqu, iincwadi zokucebisa, kunye nokubhala esikolweni esiphakeme.
Njengoko nazo zonke izikolo ezinezikolo ezamkelwa ngokupheleleyo, amabakala amahle kunye namazinga aphezulu okuvavanya aqinisekisi ukungeniswa - abafaki zicelo kufuneka babonise nezakhono zokubhala, izakhono zokucinga eziphambili kunye nokubandakanyeka kwabo kwimisebenzi yangexesha elifana neeklabhu, ezemidlalo okanye umsebenzi wokuzithandela.
I-Albany College ye-Pharmacy Acceptance Rate: iipesenti ezingama-69
SAT Ukufunda okubalulekileyo: 500/600
ISAT Math: 540/640
UMTHETHO WOMTHETHO: 23/27
I-Albany College ye-Pharmacy kunye neSayensi yezeMpilo yikholeji eyimfihlo yabucala e-Albany, eNew York, malunga neeyure ezintathu ukusuka eNew York City naseBoston. Ikholeji inika iiprogram zezesayensi kwimpilo kunye nezesayensi zabantu, ubuchwepheshe bezobuchwepheshe, i-sciences yezobisi kunye nekhemistri kunye nemfundo yezobugcisa kwimichiza yezobisi, iziphumo zempilo zophando, i-biotechnology, i-cytotechnology kunye ne-cytology yamathambo kunye ne-biotechnology-cytotechnology, kunye nogqirha inkqubo yekhemisi kunye namadidi amanani amaninzi.
Izifundo zixhaswa ngumlinganiselo we-10 ukuya ku-1 wokufunda umfundi / ubuchule . Ubomi bomfundi busebenza kunye namaqela angama-30 kunye nemibutho yabafundi. I-ACPHS i-Panthers incintisana namadoda kunye nebhola lebhola lebhola, ibhaskball kunye nelizwe eliphambili kwiNkomfa ye-NCAA ye-III ye-Hudson Valley ye-Athletic Conference, kunye nabafundi bexesha elizeleyo abanomdla kwezinye iimidlalo nabo bafanelekile ukuba bathathe inxaxheba kwiprogram yezemidlalo ye- Union College .
I-ACPHS inayo i-campus ye-satellite e-Colchester, eVermont, enika kuphela ugqirha weprogram ye-pharmacy kwimeko.
Ubhaliso lwabonke: i-1,408 (i-902 izifundo zakudala)
Ukuphulwa kwesini: i-39 pesenti yindoda / i-61 ekhulwini yabesifazane
Ipesenti ezingama-99 ezipheleleyo
Isifundo kunye neMali: $ 31,981
Igumbi neBhodi: $ 10,700
Ezinye iindleko: $ 2,598
Iindleko ezipheleleyo: $ 46,279
ACPHS Uncedo lwezeMali (2015 - 16):
Izibonelelo: ipesenti ezingama-99
Imali: ama-81 ekhulwini
Izibonelelo: $ 14,655
Imali: $ 13,616
I-Popular Majors: I- Biomedical Technology, i-Sciences Pharmaceutical Sciences
Izinga lokuQinyezelwa koNyaka-4: ama-44 ekhulwini
Izinga lokuQinyezelwa kweNyaka-6: ama-48 ekhulwini
Iimidlalo Zabantu: Iqonga leMidlalo, Umkhondo kunye neNgcambu, iBhola lebhola leBhola, ilizwe eliphambeneyo
Imidlalo yabasetyhini: Umkhondo kunye neNkundla, iNgcahla, Izwe eliPhambeneyo, iBhola lebhola
Ukuba uthanda i-ACPHS, Unako ukuthanda kwakhona ezi zikolo:
Ukuba ufuna iikholejini eneenkqubo ezinamandla kwizonyango zempilo kunye neyeza, i- MCPHS , i- UNC - i-Chapel Hill , iYunivesithi yaseArizona , kunye neYunivesithi yaseMichigan zizo zonke iindlela ezinokuzihlola.
Kwaye, kubafake izicelo abanomdla kwizikolo ezincinci (malunga nabafundi abayi-1,000-2,000) e-Hudson Valley, (ukusuka e-Albany ukuya e-Yonkers) nezinye izigqibo zokuqwalasela ziquka iKholeji yaseBard, iKholeji yaseVassar, iKholeji yeNyuvesi kunye ne- Sarah Lawrence College .
I-Clemson University Admissions
Izifundo zeMatriki zoFundo: iBakala ngeBakala
UMike Catherwood, umphathi we-GSN 'yeNtsebenzo yeCandelo'
Amagama Indawo eSpain e-US
Nguwuphi uMthetho we-DREAM?
Indlela yokusetha i-Mahjong Game
Iingoma zeKrismesi zenkolo
Iingoma ezi-10 ezidlulileyo zeeNgoma ze-2016
I-Gray's Anatomy Isiqendu 4 Isiqendu
Isicwangciso seSifundo seSgrama sesiGrike: Indlela yokusebenzisa "Njengaye"
Ngaba Siyazazi Abathandekayo Bethu Ezulwini?
Uluhlu lweKrismesi uluhlu lokudlala umdlalo we-Ice Breaker Ngaba uya kunoko
Ziziphi iiDiphthong in Grammar?